password lock Vagadziri & Suppliers |China password yekukiya Factory
Chengetedzo Biometric Door Lock Digital Electronic Combination Password Door Kiya inotsvedza gonhi digitaalinen kukiya yekutengeserana keypad lock lock Smart Entry Office Home
1.three yakazvimirira yekuvhura nzira: Password, Kadhi uye Mechanical kiyi.
2.Adopting America TI core chip inovimbisa kukwirira kwepamusoro uye kuchengetedzwa kwepamusoro.
3.OEM & ODM iripo.
4.Fake kuvhara alar, Jimmying resistance uye low voltage alarm.
5.Muvara: goridhe / sirivha / yekare ndarira
6.50 seti yekuvhura mapassword uye 1 set master password.
7.With yakajairika-yakavhurika basa.
8.Reset basa kuti uve nechokwadi chekuchengetedzwa kwekiyi kana kurasikirwa kwemakadhi kana makiyi.
Smart Electronic keyless password+fingerprint+kadhi girazi kukiya neremote control Yenyu Yemazuvano Hofisi yekugara mufurati biometric bio door lock.
1. 4 nzira dzekukiinura:Kuvhura Fingerprint, Kadhi Kiinura, PIN Code Kiinura, Remote Controller;
2. FPC inoverenga zvigunwe zvemunwe inokupa iwe yakanakisa kuchengetedza ruzivo;
3. Yakakwirira kuchengetedza zvinhu, Yakasimba zvakakwana kudzivirira imba yako;
4. OLED kuratidza sikirini, nyore kushanda;
5. Mushandisi-ushamwari hurongwa hwekushanda;
6. Zviri nyore kwazvo kuisa pamusuwo wegirazi;
7. Emergency powersupply kana simba rakarasika;
8. Tinogona kugadzirisa kugadzirwa maererano nezvaunoda,OEM/ODM;
China wifi iri kure yakachengeteka gedhi mugadziri TTlock app smart pini nhamba keypad kodhi musanganiswa keyless password yedhijitari kukiya gonhi
Type: Rudyi-Kurudyi Door
Ruvara: Sirivha / Nhema / Antique Mhangura (kusarudza)
Tsigiro: Ye Android & YeIOS
Kuvhura Modhi: APP / Password / Kiyi
Nzira dzakasiyana dzekuvhura.
Kushanda kwakangwara, kuri nyore.
Stainless simbi yekuvakwa kwekushandisa kwenguva refu.
Skena iyo QR kodhi pane bhuku kuti utore uye uise APP.
Kusvika kure Electronic Door Lock Smart Bluetooth Digital APP Wifi Keypad Code Keyless Door Kiya Password digitaalinen gonhi remberi kiyipad kukiya yekupinda musuwo kukiya
Brand New uye yepamusoro mhando.
1) Yakakodzera kune mazhinji emusuwo muviri.
2) Inokodzera mhuri, dzimba, zvikoro, nzvimbo yehofisi uye zvichingodaro.
3) Yakagadzirwa ne zinc alloy, fi re protection, anti-kuba uye anti-corrosion.
4) C level yekuvhara musimboti, anti-kuba technical support, yakachengeteka zvakanyanya.
5) Bata sikirini, guruva, kusapinda kwemvura, inonzwa kubata inonzwa.
6) Yakakwirira simba yekuchengetedza password anti-peeping tekinoroji, semuenzaniso: unogona kupinda **** 4520 ****, (kana password yako iri 4520).
7) Non-mvumirwa pasiwedhi kuedza uye kukanganisa 5 nguva achatanga kukiyinura.
8) Mubato wemahara kukiya kana kuvhura musuwo, kusimudza kukiya kwechipiri uye kudzvanya pasi kuti uvhure musuwo, upe zvakanyanya nyore muhupenyu hwezuva nezuva.
9) Panel ine emergency B level anti-theft lock core keyhole, kuchaja kwechimbichimbi, zvakare ine yakaderera bhatiri yambiro.
Intelligent Fingerprint Indoor Lock yeHotera Hotera Hofisi yemagetsi yekutengeserana makiyi ekunze inotsvedza Password Door Lock
Nzira dzakawanda dzekuvhura:
Unogona kuvhura kiyi iyi kuburikidza neAPP/Password/Kadhi/Kiyi, inokupa dzimwe sarudzo.
Password yako yakasarudzika, iyo inovimbisa kuchengetedzwa pasina kupokana.Kutora mukana we tekinoroji ye semiconductor inogamuchirwa, iyo inodzivirira iyo yakafanana password.Chii zvakare, chakagadzirwa neakasimba Aluminium Alloy zvinhu, hunhu hwayo hwakavimbika.
biometric Electronic Intelligent lock 4 Ways Fingerprint Door Kiya Mvura Isingapindi Gedhi Rekunze Bluetooth Kiya TUYA Kiya App Passcode Rfid Card Keyless Front Electronic Lock
Vhura neFingerprint, kodhi, Kadhi, uye kiyi yemuchina.
Tsigira zana zvigunwe / mazana maviri ID Kadhi / 1 mapoka password.
Mubato wemahara, simudza mubato kuti uvhare bhoti yakafa.
Aluminium alloy zvinhu, anti corrosion uye yakasimba.
Chikamu chekushandisa: gonhi rekushongedza, gonhi realuminium rakaputsika uye hwindo, PVC gonhi.
Kuiswa chisimbiso kwakanaka kwefuselage, kunyatsodzivirira mvura kuti isapinda.
Tuya App zvigunwe zvakangwara Door Lock rfid keyless gedhi hotera girazi mortise magetsi WIFI Remote Imba Yemagetsi Digital Fingerprint Door Lock neTuya App
kukiya kwegonhi rezvigunwe zvazvino uno.Dhizaina yakawanda fashoni uye App system zviri nyore.Bata mubato wodzvanya zvigunwe kuti uvhure munhanho imwe.Kiyi iyi inogona kushandiswa kumapuranga nekuchengetedza magonhi uye inokodzera marudzi ese emotise.
Pahwaro hwematanho matanhatu ekuvhura nzira: Fingerprint kiinura, APP Vhura, Remote WiFi Kiinura, Password / PIN Kiinura, M1 Kadhi Kiinura uye Mechanical Keys Unock.Isu takagadziridza kuremote controller kuvhura uye NFC kuvhura, 8 nzira dzekuvhura dzinoita kuti ruzivo rwemushandisi rwakanyanya kuvandudzwa!
Ichazadzisa zvese zvaunoda nezve smart lock.Iwe unogona kubata yako smart yekuvhara gonhi chero kupi uye chero nguva ne APP.
© Copyright - 2010-2021 : Kodzero Dzese Dzakachengetedzwa. Featured Products, Sitemap, Sliding Door Replacement Lock, Sliding Glass Door Mubati Nekiyi Kiyi, Kiya Yegedhi, Hotel Drawer, Magetsi Door Locks Commercial, Yakanakisa Smart Door Lock 2020, Zvese Zvigadzirwa